UKUPHOLA IIADVENTURES ZESABRINA YEXESHA LESI-3 KUHLAZIYO LWAMVA NJE, INEW CAST, SINEENDABA EZINOMDLA KUWE - IINKQUBO ZETV
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yezona ngqungquthela zidumileyo nezithandwayo zeNetflix, iChilling Adventures kaSabrina, sele ilungele ukubuya
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yezona ngqungquthela zidumileyo nezithandwayo zeNetflix, Ukuphola iiAdventr Sabrina , konke kusetelwe ukuba kubuye nexesha layo le-3. Ukuqhayisa komboniso kukhulu kangangokuba abalandeli bayilindele ngokulangazelela. Funda inqaku elipheleleyo ukuze ufumane lonke uhlaziyo malunga nexesha elizayo.
Nangona kungekho siqinisekiso malunga umhla wokukhutshwa I-Chilling Adventures yeSabrina ixesha lesithathu, inokulindelwa ukuba ifike emhlabeni kungekudala, ixesha lokuqala loluhlu lafika ngexesha le-Halloween, ngo-Okthobha u-2018. Kodwa kukuphela konyaka ngoku, kwaye akukabikho zindaba zokuphehlelelwa.
U-Ergo, sinokulindela ukuba ifike kwi-2020, okanye ichaneke ngakumbi, ngexesha lasentwasahlobo le-2020. Ukudubula kwexesha elilandelayo sele kugqityiwe ngo-Okthobha u-2019. Ewe, oko kuthetha ukuba abadlali kunye neqela bazenzile iindawo zabo. .
Yintoni umlingisi womboniso?
Ngoku, awunomdla wokwazi okungakumbi malunga umboniso womboniso?
Uninzi lwabalinganiswa bexesha elidlulileyo bayabuya, abanjengoAbigail Cowen, uLucy Davis, noMiranda Otti. Kwaye uMcKenna Grace uzakube edlala uSabrina Spellman. Ke, siza kubona ubuso obuqhelekileyo kumdlalo buqhubeka kunye nabalinganiswa babo.
Amanye amalungu amatsha nawo adityaniswa. UAlexis Deniseff, umlinganiswa we-vampire slayer, oza kudlalwa nguAdam Masters. Into eyothusayo yeyokuba uMichelle uza kudlala indima ephindiweyo kweli xesha lonyaka. Siyazi nokuba uMadam uSathana uhlala etroneni kwaye akazukulungela ukuphulukana nayo nangaliphi na ixabiso.
Lithini ibali lonyaka?
KwiChilling Adventures kaSabrina ixesha lesithathu, ibali liya kujikeleza ujikeleze indlela indima ekhokelayo, uSabrina, ayifumana ngayo inkwenkwe yakhe uNick esihogweni. Ngokwezinye iindaba, uSabrina akazukuhlala yedwa kuhambo lwakhe esihogweni.
UNick wazincama ukuze ayeke i-apocalypse.
Ngenxa yoko, wagxothelwa esihogweni kunye noMadam uSathana kunye no-Dark Lord naye wayevalelwe ngaphakathi kuye.
Ngoku uSabrina kuya kufuneka oyise iNkosi emnyama kanye kunye. Ngoku, ngaba uSabrina uza kufumana ithuba lokuchitha ubomi bakhe kunye noNick? Ngaba uHarvey uza kuziva kakubi ngayo?
Abafaki bacela i-crossover phakathi kwe-Riverdale kunye neSabrina kwaye nayo yonke ixesha elitsha, ithemba labalandeli liyanda.
Yintoni esiza kusizisela yona ngeli xesha lonyaka inomdla kakhulu ukuba ungazibuza?
Masilinde i-trailer ukuba ifike kwaye ibonakalise ukuba yintoni yonke imilingo ekhoyo kwixesha elizayo. Ukuza kuthi ga ngoku uhlale ekhaya kwaye ukhuseleke.
khupha iingcango zomntwana
yi kakegurui inetflix yoqobo
Ixesha lesibuko esimnyama 6
umtyholi inxenye yexesha lesibini 2
Uya kukhululwa nini umkhosi wamagorha wexesha lesi-2
indlela yokubukela ipaki esemazantsi kwi-hulu
Umhla wokukhutshwa kwe-hero hero